Qaramada Midoobay oo Kenya ka taageereysa dagaalka Alshabaab – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Nairobi: Mareeg.com: Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay Ban Ki- Moon ayaa sheegay in wadamada caalamka go’antahay inay dowlada Kenya kala shaqeeyaan la dagaalanka weerarada Alshabaab ay ka geystaan magaalooyinka dalkaasi.
Ban Ki-Moon ayaa hadalkan sheegay kaddib kulan uu xarunta madaxtooyada Kenya kula qaatay madaxweynaha dalkaas, Uhuru Kenyatta, iyagoo kawada hadlay sidii ay Qaramada Midoobay iyo dowladda Kenya uga wada shaqeyn karaan ka hortagga weerrrada ka imaanaya argagaxisada.
“Qaramada Midoobay waxaa ka go’an inay dowladda Kenya ka caawiso kobcinta awooda, taasoo qayb ka ah qoshe lagu doonayo in argagaxisada looga hortago,” ayuu yiri Ki-Moon, inkastoo uusan sheegin qaabka ay u caawinayaan.
Sidoo kale, xoghayuhu wuxuu sheegay inay isaga iyo Kenyatta kulankooda kaga wada-hadleen arrimaha siyaasadda iyo ammaanka, gaar ahaan sidii looga wada-hortegi lahaa argagaxisada oo khatar ku ah gobolka oo dhan.
Dalka Kenya ayaa tan iyo markii ay ciidamadeeda u dirtay Somalia dhammaadkii sannadkii 2011-kii waxaa ka dhacayay weerarro taxane ah oo ay geysanayeen xoogag taageersan Al-shabaab, kuwaasoo ay ku dhinteen dad fara badan.
Wuxuu sidoo kale Ban Ki Moon uu sheegay inay si wadajir ah ay kaga doodeen arimaha dhanka amaanka iyo la dagaalanka Alshabaab, iyo xaaladaha wadamada Soomaaliya, koofur Sudan iyo harada weyn ee gobolka.
“Waxaan si wadajir ah an kaga doodnay amaanka iyo la dagaalanka argagixisada, sida Somalia, Koofur Sudan iyo harada weyn ee gobolka” sidaasi ayuu saxaafada ugu sheegay magaalada Nairobi.
Kenya amaanka ayaa qalqal galay waxii ka dambeeyay markii Alshabaab ay weeraro kala duwan ka geysteen dalkaasi, kadib markii ciidamada Kenya ay kusoo biireen howlgalka AMISOM ee Soomaaliya.
Alshabaab oo ku hanjabay weeraro dheeraad ah oo ka dhaca Muqdisho